Imifanekiso yamaphephadonga e-OnePlus 6T entsha ngoku iyafumaneka | I-Androidsis
Njengoko bekucwangcisiwe, nangona inkampani kuye kwafuneka ihambise phambili umhla wokufayilwa ukuze ingangqinelani umsitho wentetho owenziwa nguApple ibanjwe kwiiyure ezimbalwa, inkampani ye-OnePlus yazisa ngokusesikweni i-OnePlus 6T entsha, i-terminal esinika inani elikhulu lotshintsho ngokuthelekiswa nengaphambili kwayo.
I-OnePlus 6T entsha inokuqwalaselwa isizukulwana esitsha ngaphaya kokubuyiswa okuqhelekileyo okunikezelwa luhlu lwe-TKuba ubungakanani bescreen buye bandiswa, kodwa inzwa yeminwe idityanisiwe phantsi kwayo, indawo eza kuba sisiqhelo kungekudala kwizixhobo ezininzi.
Kwi-Androisis sele sisebenzele ukukwazisa Zonke iindaba ezinokufumaneka kwesi sigxina, Ukongeza ekunikezeleni nge Thelekisa phakathi kwe-OnePlus 6 kunye ne-OnePlus 6T. Sikwenza ukuba kufumaneke, ngokusebenzisa eli nqaku, zonke ii-wallpapers ezivela esandleni sesiphelo esitsha yokutyikitya. Ukuba ufuna ukuzikhuphela, emva koko sichaza indlela yokwenza ngokulandela amanyathelo ambalwa alula.
Kwakhona, I-OnePlus ixhomekeke kwiHampus Olsson ukukhathalela uyile amaphephadonga esizukulwana esitsha se-OnePlus. Ngesi sihlandlo, siya kuba nakho ukonwabela amaphephadonga amathathu amatsha, afumaneka nge2k + kunye 4k. Ukongeza, siza kufumanisa, kwinguqulelo ye-2k, isicatshulwa esihamba ne-OnePlus kule minyaka idlulileyo: Ungaze Uhlale
Yonke imifanekiso yamaphephadonga iyafumaneka ukhuphelo lwakho isisombululo sokuqala, eya kukuvumela ukuba uyisebenzise ngokuthe ngqo kwizixhobo zethu.
Ukuba ungumthandi wamaphephadonga, sicebisa ukuba undwendwele icandelo lethu Iwallpaper kwi-Android, qiniseka ukuba uthandana ngaphezu kwesinye 😉
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimifanekiso ze-OnePlus 6T ezintsha ziyafumaneka ngoku